Wararka - Polyurethane cusub oo lidka ku ah bakteeriyada oo ka caawisa Safarka Caafimaadka leh
Polyurethane cusub oo lidka ku ah bakteeriyada ayaa caawisa Safarka Caafimaadka leh
Bishii Sebtember 6, cilmi-baarista kiimikada ee liming iyo Machadka Naqshadeynta ayaa soo saaray alaabada labaad ee polyurethane ee bakteeriyada ka hortagga bakteeriyada, polyurethane automobile skylight muraayad alaabooyin taxane ah, oo leh astaamo antibacterial aad u fiican, markii la sii daayo, isla markiiba waxay soo jiidatay dareenka ballaaran.
Warbixinta baaritaanka waxay muujineysaa in waxqabadka caaryada ee taxanaha badeecadaha uu gaarayo heerka ugu sarreeya 0, heerka xaddiga bakteeriyada wuxuu gaarayaa in ka badan 99,9%. Waxay leedahay caaryar anti-aad u fiican iyo sifooyinka bakteeriyada, waxayna xakameyn kartaa taranka iyo waxqabadka taranka bakteeriyada, si loo gaaro ujeedka bakteeriyada waxtarka sare leh.
Ka dib markii la dhameystiray qalabka isugeynta isteerinka isteerinka isteerinka ee istiraatiijiga ah, waxaan si madax banaan u soo saarnay shey kale oo ka hortaga bakteeriyada - Antibacterial Polyurethane automobile skylight glass edging, taas oo sii kordhisay walxaha cusub ee polyurethane ee ka caawinaya safarka caafimaadka qaba. Kuxigeenka injineerka kuxigeenka machadka Liming, maareeyaha guud ee shirkada horumarinta polyurethane Zhao Xiuwen ayaa yiri.
Nooc ka mid ah xarumaha lagu hagaajinayo raaxada baabuurta, iftiinka cirka ayaa si tartiib tartiib ah u noqday qaabeynta caadiga ah ee baabuurta rakaabka. Si kastaba ha noqotee, iftiinka cirka wuxuu ku yaalaa jawiga cimilada ee ka baxsan gaariga iyo jawiga degan gaariga dhexdiisa, sidaas darteed wuxuu leeyahay gaar ahaaneed. Iftiinka cirku wuxuu ku yaalaa dusha sare ee gaariga. Xaaladda iftiinka iyo roobka muddo dheer, qaabdhismeedka gudaha sida kanaalka hagaha biyaha ayaa badanaa ku jira xaalad qoyan, kaas oo bixiya goob kulul oo loogu talagalay koritaanka dhammaan noocyada bakteeriyada iyo caaryada. Isla mar ahaantaana, iftiinka cirku wuxuu si toos ah ugu xiran yahay qolka qolka, taas oo kordhisa halista gudbinta bakteeriyada, caariyaadka iyo dareenka.
Khubaradu waxay rumeysan yihiin in cudurka sambabka ee loo yaqaan 'coronavirus pneumonia' uu yahay hab caadi ah oo cudur loo qaado. Codsiga qalabka duubista muraayadda bakteeriyada ayaa aad muhiim ugu ah xannibaadda faafitaanka bakteeriyada iyo ilaalinta caafimaadka dadka deggan.
Taxanaha Antibacterial Polyurethane automobile skylight glass edging lenses are the alaha cusub ee dhalada galaas daaha laga soo saaray iyadoo la adeegsanayo isbitaal liming madax banaan iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada nano bakteeriyada iyo uruurinta kheyraadka sare inta lagu jiro mudada cudurka faafa ee Zhao Xiuwen ayaa sheegay in 500 ee saac ee waxsoosaarka heerka cirrada ee gabowga. waa 4; darajada urku waa 3.0-3.5, taas oo ka horreysa heerka wax soo saarka caalamiga ah ee la midka ah 4.0; xaaladaha gaadiidka iyo keydinta ee isocyanate-ka wax laga beddelay ayaa laga nastay 15 ℃ - 35 ℃ ee badeecadaha caalamiga ah ee la midka ah - 5 ℃ - 35 ℃; heerka ugu horreeya ee alaabooyinka ayaa ka sarreeya 98.0%, oo ka sarreeya 93% alaabooyinka la midka ah ee caalamiga ah; Waxyaabaha farsamaysan sida xoogga silica iyo jeexjeexa xoogaa 20% ayey ka sarreeyaan kuwa alaabada la midka ah ee adduunka ka jira. Wax soo saarkiisa ayaa ka gudbay tijaabada sumcadda baabuurta caanka ah, waxaana si toos ah loo siiyay qaybo badan oo ka mid ah qaybaha wax soo saarka baabuurta
“Novel coronavirus oof wareenka ayaa sii xoogeysan doona mustaqbalka, wuxuuna gacan ka geysan doonaa kahortaga faafida cudurada, la dagaalanka cudurka oof-wareenka cusub iyo ilaalinta caafimaadka dadka.” Ayuu yiri Zhao Xiuwen.